I-EA079-SETS - I-OMG Recordable Voice Alarm Fall Prevention Bed Pad Set - I-Alarm Ewa Esebenza Nebhedi Lokulala Nokudonsa-Intambo - Izixazululo ze-OMG
I-Alamu Yenjongo Ehlukile Ehlukile
I-EA079-SETS DUAL Recordable Voice Monitor isebenza njengokuqapha kokudonsa intambo noma i-sensor pad track futhi ingadluliselwa kalula isuka embhedeni iye esihlalweni sabakhubazekile nangemuva, ngaleyo ndlela kuqedwe isidingo semishini yokuqapha eminingi. Izexwayiso ze-alamu lapho intambo kazibuthe yokudonsa idonswa ingenakuqapha noma uma ingcindezi isuswa pad. Ukuqapha kusetha kabusha ngokuzenzakalelayo lapho intambo kazibuthe yokudonsa ifakwa esikhundleni noma uma ingcindezi isetshenziswa kabusha kufriji yenzwa exhunyiwe.
Susa umsindo othusayo we-alamu ngokurekhoda umlayezo oqondene nomuntu uqobo ukuze udlalwe emuva lapho i-alamu icushiwe. Ngemizuzu efinyelela kwengu-15 yesikhathi sokudlala etholakalayo, ungaqopha izwi noma umculo ojwayelekile ozwakale njengomsindo wokuqwashisa, onjengokuthi "ngicela uhlale phansi Mnu. Jones, usizo lusendleleni."
Kuhlala Kulungele Njalo
Le Monitor yakhelwe ngaphandle kokushintsha ON / OFF, okusho ukuthi KUKHONA KONKE futhi akunakucishwa. Abanakekeli basebenzisa i-Alarm Reset Button efinyeleleka kalula ukuthulisa i-alamu futhi banakekele izidingo zabahlali ngaphandle kwengozi yokushiya i-alamu ngengozi.
• Ibanga Lobungcweti
• Imisebenzi Emabili
• Inketho Yezwi Erekhodekayo
• I-Pad Lost, i-Low Battery ne-Alarm Status Indicator Lights
• Ukwazi Ukusebenza Kwezinesi
• Inzwa Yombhede Pad 10 ″ x30 ″
• Izinketho zokuqapha: ICorded Chair Pad, Phansi Mat, Seal Belt, kanye neFall Matress
• Amabhethri angafakiwe (3-AA)
I-EA079-SETS: I-Recordable Voice Alarm Fall Prevention Bed Pad Set - I-Alarm Ewa Esebenza Ngebhedi Pad & Pull-String (unyaka owodwa iwaranti)
I-EA079-PB: I-Sensor Bed Sensor Pad engu-10 ″ x30 ″, Ukukhishwa Okuphephile Kokuvikela Ukuwa (Iwaranti yonyaka owodwa)
I-EA079-AL: I-Alamu Yezwi Erekhodiwe Yokuvimbela Ukuwa (Iwaranti yonyaka owodwa)
Ukubuka okuphelele kwe-466 Ukubuka kwe-2 Namuhla